बालगोपाल यो तिहारमा पनि बाहिरै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बालगोपाल यो तिहारमा पनि बाहिरै
कार्तिक २२, २०७५ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौँ — रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मूर्ति तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय संग्रहालय, छाउनीमा छ । दिदी–बहिनी नहुनेका लागि वर्षमा एकपटक मात्रै खुल्ने मन्दिरमा यही मूर्ति साक्षी राखेर भाइटीका लगाउने परम्परा थियो । भुइँचालो आएपछि पनि यो परम्परा रोकिएको छैन ।
बालगोपालेश्वरको मूर्ति रहेको रानीपोखरीस्थित मन्दिरको भग्नावशेष । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर
तर त्यस दिनका लागि हरेक वर्ष संग्रहालयबाट यहाँ मूर्ति ल्याउनुपर्छ । यो वर्ष पनि भाइटीकालाई मूर्ति ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
सरकोरवाला निकायको ‘बखेडै–बखेडा’ ले यसको पुनर्निर्माणमा अन्योल सिर्जना भएको छ । २०७३ सालको भाइटीकामै खोल्ने गरी निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको थियो यो मन्दिर । २०७२ माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माणको शिलान्याससमेत गरेकी थिइन् । महानगरले शिलान्यास भएको ५ महिनापछि पुनर्निर्माण सुरु गरेको थियो । तर यसको निर्माण गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत भएपछि सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि निर्माण रोकिएको थियो । त्यसयता पोखरी सुकेको छ । मन्दिर लथालिंग छ ।
संस्कृतिविद् काशीनाथ तमोटका अनुसार यो मन्दिरमा तीनवटा मूर्ति छन् । यसमा मन्दिरमा हरिशंकरी, बालगोपाल र शिवलिंग गरी तीनवटा मूर्ति छन् । यसमध्ये सबैभन्दा अनौठो मूर्ति हरिशंकरीको हो । ‘यस्तो मूर्ति भारतमा पनि छैन । नेपालमा मात्रै हो,’ तमोट भन्छन्, ‘यो नेपालकै युनिक मूर्ति हो । तर छायामा छ । धेरैलाई जानकारी छैन । यसको प्रचार पनि भएको छैन ।’
हरिशंकरी भनेको लक्ष्मी र पार्वती जोडिएको मूर्ति हो । ‘लक्ष्मी र पार्वती जोडिएर हरिशंकरी भएको हो,’ तमोट भन्छन्, ‘विष्णु र शिव जोडिएर हरिशंकर भएका मूर्ति थुप्रै छन् । भारतमा पनि धेरै छन् । नेपालमै पनि छन् । तर लक्ष्मी र पार्वती जोडिएका मूर्ति जम्मा तीनवटा छन् नेपालमा । पाटनको टुसाहिटी, हनुमानढोकाको सुन्दरी चोक र बालगोपालेश्वर मन्दिरमा ।’
वर्षमा एकपटक मात्रै खुल्ने यो मन्दिरका देवताबारे धेरैलाई थाहा नभएको तमोट बताउँछन् । बालगोपालेश्वर भनेर चर्चा गरिएको मूर्ति पनि बालगोपालेश्वर नभई बालगोपालको भएको तमोट बताउँछन् । ‘बालगोपालको छेउमा शिवलिंग छ । त्यही भएर गोपाललाई पनि गोपालेश्वर भन्न थाले । खासमा गोपाल भनेको सानो कृष्ण हो । लिंग भनेको शिव हो,’ तमोट भन्छन्, ‘भन्दा भन्दा गोपालेश्वर भन्न थालियो । यसको वास्तविकता के हो भनेर खोजिएन ।’ तमोटका अनुसार वि.सं. १७२१ वैशाखमा पोखरी खनियो । १७२३ मा पोखरीको शिलान्यास गरियो । त्यही वर्षको माघ १३ मा पोखरीको बीचको देवलमा अग्निहोत्र स्तोत्र गरियो । ‘यसको चार दिन पहिला अग्निस्थापना गरिएको थियो,’ तमोट भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानको दिनमा ललितपुरका राजा श्रीनिवास मल्ल समेत आएका थिए ।’
तमोटका अनुसार देवल प्रतिष्ठानपछि त्यहाँको मुख्य देवी हरिशंकरी मूर्ति राखिएको उनी बताउँछन् । ‘प्रताप मल्लले माघ व्रत समाप्त गरी छोरा चक्रव्रतेन्द्रको नाममा माधवनारायणको मूर्ति रानीपोखरीको उत्तरतिरको खण्डमा स्थापना गरे,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ शिलालेख पनि राखिएको छ । शिलालेखमा विभिन्न तीर्थस्थलबाट पानी ल्याएर रानीपोखरी बनाएको उल्लेख छ ।’ वि.सं. १७२७ मा पोखरीको चार किल्लाको साँधमा चारवटा शिलालेख राख्न लगाएका थिए । त्यहाँ राखिएका शिलालेख कहाँ छन्, अत्तोपत्तो छैन । राष्ट्रिय नाचघर जमलको छेउमा एउटा मात्रै शिलालेख रहेको छ ।
धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वको रानीपोखरी सरोकारवाला निकायको विवादकै कारण ढिलाइ भएको छ । यसको सबैभन्दा बढी बखेडा पुरातत्त्व विभागले नै निकालेको सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गुनासो गर्छन् । अहिलेको मुख्य विवाद रानीपोखरीबीचको मन्दिर कुन शैलीमा बनाउने भन्नेमा छ । विज्ञले ग्रन्थकूट शैलीमा बनाउन सुझाव दिएका छन् । गत साता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भएको बैठकमा ग्रन्थकूट शैलीमा बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । प्राधिकरण ग्रन्धकूट शैलीमै बनाउने पक्षमा छ । त्यसमा पुरातत्त्व विभाग भने सहमत भएको छैन ।
रानीपोखरीमा दुई वर्षअघि विवाद आउँदा पुरातत्त्व विभागले प्रमाण भेटिए प्राचीन शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न सक्ने बताएको थियो । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले भनेका थिए, ‘प्राचीन शैलीको प्रमाण भेटियो भने त्यहीअनुसार निर्माण गर्न तयार छौं ।’ रानीपोखरी पुनर्निर्माणको क्रममा विवाद भएपछि प्रताप मल्लकै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न सुझाव दिने गरी बनेको विज्ञ समिति सदस्यमा उनै कुँवर समितिमा छानिए । समितिले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा कुँवरसहित पुरातत्त्व विभागका तीनजना सदस्यले हस्ताक्षरै गरेनन् । त्यतिबेला कुँवरले भने, ‘यो संस्कृतिमा आएको परिवर्तन हो । राणाकालमा संस्कृतिमा परिवर्तन आयो । परिवर्तन आएको संस्कृतिलाई स्विकार्नुपर्छ । राणाकालमा आएको सांस्कृतिक परिवर्तनलाई हामीले मास्नु हुँदैन ।’
उनै व्यक्तिका दुईथरी कुरा किन आए भनेर आश्चर्यमा छन् सम्पदा प्रेमी । ‘पहिला पुरातत्त्वले आफूले बनाउने जिम्मा लिएको थिएन । त्यतिबेला यसको निर्माणको जिम्मा महानगरपालिकाले लिएको थियो । महानगरले बनाउने बेलामा चाहिँ प्राचीन शैली भन्ने, अनि अहिले आफूले बनाउनुपर्ने बेलामा चाहिँ सांस्कृतिक परिवर्तन भनेर बखेडा निकाल्ने ?’ सम्पदा अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधर भन्छन्, ‘यो सब कमिसनको खेल हो । हामी यो वा त्यो बहानामा सम्पदा मासिन दिँदैनौं । विज्ञले प्रमाणसहित प्रताप मल्लको पालाको स्वरूप दिएको छ । यसलाई पुरातत्त्वले नमानी सुखै छैन ।’
रानीपोखरीको अहिलेको शैली गुम्बज हो । प्रताप मल्लको पालामा चाहिँ यो ग्रन्थकूट (शिखर) शैलिमा भएको प्रमाण भेटिएको विज्ञ समितिका संयोजक पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णु कार्कीले जानकारी दिए । ‘यसको प्रमाण हाल मन्दिरको चारैतर्फको प्रवेशद्वारमा राखिएको ढुंगाद्वारा निर्मित संघारले पनि पुष्टि गर्छ । उक्त कुरा प्राप्त पुरानो मन्दिरको शैलीको स्केचबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । उक्त चित्र सन् १८४५ फेब्रुअरीमा तात्कालीन पर्सिया देशका राजकुमार वाल्डमार नेपालमा घुम्न आउँदा उनका साथ आएका कलाकारले बनाएको चित्र हो,’ कार्कीले भने, ‘उनीभन्दा १ सय २४ वर्षअघि नेपाल आएका इटालीका जेस्विट्इपोलिटो डेसिडेरी तिब्बतबाट भारत फर्कने क्रममा गरेको यात्रा वर्णनले पनि पुष्टि गर्छ ।’
जंगबहादुरले निर्माण गर्न लगाएको मन्दिर वि.सं. १९९० को महाभूकम्पले क्षति पुर्‍याएकाले अहिलेको शैलीमा जुद्धशमशेरले पुनर्निमाण गर्न लगाएका थिए । उनले जंगबहादुरले निर्माण गर्न लगाएको गुम्बजाकार शैलीभन्दा केही भिन्न शैलीको शिखर मन्दिर निर्माण गर्न लगाएका थिए । उनले मन्दिर पुनर्निमाणका साथसाथै पोखरीको गाह्रो लगायतका क्षेत्रसमेत मर्मत गर्न लगाई पोखरीको संरक्षण कार्य गरेको हालको पुरातात्त्विक उत्खननबाट समेत स्पष्ट भएको कार्कीले जानकारी दिए । ‘उत्खननबाट पेटीमा प्रयोग भएका जुद्ध अंकित वि.सं. १९८९ लेखिएका इँटाहरूबाट स्पष्ट हुन्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘वि.सं. १९९० को महाभूकम्पलगत्तै रानीपोखरीको जीर्णोद्धार कार्यलाई पनि पहिलो प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । रानीपोखरी जीर्णोद्धार वि.सं. १९८९ का जगेडा इँट्टाहरूबाट गरेको देखिन्छ । जसले भूकम्पपछि रानीपोखरीको जीर्णोद्धार कार्य तत्काल सुरु गरेको प्रमाणित हुन्छ ।’
रानीपाखरीमा पोखरीको भाग महानगरपालिकाले र मन्दिर निर्माणको जिम्मा पुरातत्त्व विभागले लिएको थियो । मन्दिर पनि पहिला महानगरले पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत बनाएपछि त्यसलाई भत्काएर पुरातत्त्वले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । मन्दिरको निर्माणलागत १ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । पोखरीको पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक तथ्यको खोजी गर्ने क्रममा विभिन्न तथ्यसमेत प्राप्त भएको कार्कीले जानकारी दिए ।
त्यही प्राप्त तथ्यका आधारमा पोखरी पुनर्निर्माण गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको हो । ‘सो आधारमा निर्माण गरी पुरानो दक्षता, प्रविधि र स्वरूपको निरन्तरता हुने र मौलिकता कायम हुने हुँदा प्रताप मल्लकालीन पोखरीको सतह निर्माण प्रविधि, गाह्रोको शैली एवं स्वरूप, मौलिक सामग्रीको प्रयोग गर्नाले परम्परागत प्रविधिको निरन्तरता एवं ज्ञान स्थानान्तरण हुँदै जाने देखिन्छ । यसले हाम्रा ऐतिहासिक कालमा सिर्जना भएका सीप र ज्ञानको अवस्था कस्तो थियो भन्ने विषयलाई प्रमाणीकरण गर्नुका साथै त्यस्तो ज्ञान र सीपको उन्नतिमा भएको वैज्ञानिक प्रगति समेतलाई इंगित गर्छ ।’
पुरातत्त्वले भने विज्ञसमिति पोखरीको अध्ययन गर्नका लािग मात्रै भएकाले मन्दिरको विषयमा उसले दिएको प्रतिवेदन मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताउँदै आएको छ । ‘मन्दिरमा विवादै थिएन,’ पुरातत्त्वका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘विवाद पोखरीमा हो । मन्दिर त हामीले पहिला जुन स्वरूपमा थियो, त्यसैअनुसार बनाएका थियौं । मन्दिरका धेरै काम सकिएका छन् । अब यसलाई चलाउन थाल्ने हो भने ५ वर्षमा पनि मन्दिर निर्माण सकिँदैन । ठेक्का रद्द गरियो भने ठेकेदार पनि अदालतमा जान्छन् । झन् लफडा हुन्छ । त्यही भएर मन्दिरमा लफडा गर्नुहुँदैन ।’
सम्पदाप्रेमी भने पुरातत्त्वको यो भनाइ मान्न तयार छैनन् । ‘हामीले पहिलादेखि नै प्रताप मल्लले जुन शैलीमा बनाएका थिए, त्यसैअनुसार हुनु पर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौं,’ सेभ हेरिटेजका अभियन्ता तुलाधर भन्छन्, ‘पुरातत्त्वले अटेर गरेको हो । सम्पदा जोगाउने निकाय हो पुरातत्त्व । तर जोगाउनुपर्ने निकाय नै यो वा त्यो बहानामा मास्न लागेको देख्दा हामीलाई उदेक लागेको छ । हामी मास्न दिँदैनौं । फेरि पनि दम्भ देखाएर मास्न लागियो भने जनताले कठघरामा उभ्याउनेछन् । जनताले आफ्नो सम्पदा जसरी पनि जोगाएरै छाड्छन् ।’
रानीपोखरी २०७३ चैत सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कँडेल जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो । त्यही कम्पनीले मन्दिरमा पुरातात्त्विक निर्माण सामग्री प्रयोग नगरी बनाएपछि विरोध भएको थियो । त्यसपछि मन्दिरको निर्माणको जिम्मा पुरातत्त्व विभागले लिएको थियो । पुरातत्त्वले पनि पुरानै ठेकेदारलाई फेरि निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७५ १०:५६
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन : ट्रम्पलाई धक्का
हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत
कार्तिक २२, २०७५ एजेन्सी
वासिङटन — अमेरिकामा मंगलबार भएको मध्यावधि निर्वाचनमा सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीले संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा नियन्त्रण गुमाएको छ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत हासिल गरेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई धक्का लागेको छ । उनलाई अब बिना अड्चन आफ्ना एजेन्डा अघि बढाउन समस्या पर्नेछ ।
हाउसमा बहुमतका लागि २१८ सिट आवश्यक पर्नेमा डेमोक्रेटिकले नेपाली समयअनुसार बुधबार साँझसम्म २२१ सिट हासिल गरेको छ भने रिपब्लिकनले १९९ सिट प्राप्त गरेको छ ।
हाउसको ४३५ सिटका लागि चुनाव भएको थियो । रिपब्लिकन पार्टीलेसिनेटमा भने बहुमत हासिल गरेको छ । सिनेटको १ सय स्थानमध्ये ३५ सिटमा चुनाव भएको हो । चुनावी नतिजापछि सिनेटमा डेमोक्रेटिकको ४५ सिट र रिपब्लिकनको ५१ सिट रहनेछ ।
मंगलबारको मध्यावधि निर्वाचन राष्ट्रपति ट्रम्पको दुई वर्षको कार्यकालको ‘जनमत संग्रह’ का रूपमा लिइएको थियो । सिनेटमा सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीलाई बहुमतको अर्थ हो, ट्रम्पको कार्यकारी र न्यायिक नियुक्तिले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छैन । तर हाउसमा डेमोक्रेटिकको बहुमत हुँदा ट्रम्पको नीति पारित हुन विभिन्न अवरोध सामना गर्नुपर्नेछ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीले भर्जिनिया, इलिनोइस र फ्लोरिडामा जित हासिल गरेको छ । यस्तै, डेमोक्रेटिक पार्टीकी २९ वर्षीया अलेक्जेन्ड्रिया कोर्टेज अमेरिकी कांग्रेसमा निर्वाचित हुने सबैभन्दा कम उमेरकी प्रतिनिधिबनेकी छन् । यस्तै सोही पार्टीबाट दुई मुस्लिम महिला चुनिएका छन् । जसमा इल्हान उमर र राशिदा तालिब छन् । हाउसमा २ मुस्लिम महिलासहित ८९ महिला निर्वाचित भएका छन् । यसअघि ८४ महिला चुनिएका थिए ।
डेमोक्रेटिककी हाउस नेता न्यान्सी पेलोसीले विजयपछि वासिङटनमा सम्बोधनका क्रममा मतदातालाई धन्यवाद दिँदै अब नयाँ अमेरिका हुने बताएकी छन् । मध्यावधि चुनावको परिणामका विषयमा राष्ट्रपति ट्रम्पले शृंखलाबद्ध ट्विट गरेका छन् । एक ट्विटमा उनले भनेका छन्, ‘१०५ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिको पार्टीबाट सिनेटमा बहुमत हासिल भएको छ । ट्रम्पसँग जादु छ । जब पूरैमिडिया मेरोविरुद्ध थियो, हरेक दिन तिनीहरूले आक्रमण गर्थे, तर पनि ट्रम्पको जादु चल्यो ।’
यस्तै, ५० गभर्नरमध्ये ३६ का लागि चुनाव भएकोमा मिसिगन, इलिनोइस र कान्ससमा डेमोक्रेटिक पार्टी विजयी भएको छ । अमेरिकाको यो मध्यावधि निर्वाचनमा ५० वर्षयता सबैभन्दा बढी मतदान भएको थियो । यसअघि अमेरिकी नागरिक यस चुनावलाई राष्ट्रपति चुनावजति गम्भीर रूपमा लिँदैनथे ।
अमेरिकी कांग्रेसको यो निर्वाचन हरेक ४ वर्षमा नोभेम्बरमहिनामा हुन्छ । राष्ट्रपतिको कार्यकालको बीच समयमा हुने भएकाले यसलाई मध्यावधि (मिड–टर्म) निर्वाचन भनिन्छ । यही चुनावले राष्ट्रपतिको बाँकी कार्यकाल कस्तो हुन्छ भन्ने तय गर्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७५ १०:५०
पारस्परिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता
रासस, तस्बिर: प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना